ukuthi umuthi ngempumelelo "Gormel"? Ukubuyekeza, intengo, ifomu kanye nokwakheka izidakamizwa ethulwa ngezansi. Uyofunda mayelana inhloso ngawo ezinqunyiwe ikhambi, yini ngandlela Izimo, ukusabela ezingezinhle okuyinto zenzeka ngemuva kuzothatha, nokunye. D.
Ubujamo, incazelo, emabhokisini kanye nokusungulwa
Ngayiphi ifomu ekhiqizwa izidakamizwa "Gormel"? Izibuyekezo Ochwepheshe ukubika ukuthi izidakamizwa iyatholakala njengoba amathonsi esobala homeopathic kwezokuphatha ngomlomo. Kungenzeka kungekho nto enemibala emihle noma abe ukukhanya umbala ophuzi kanye nephunga ethanol.
Ngokusho imiyalelo, lichaza ekwakheni izidakamizwa ingena izinto more esebenzayo: offitsinalis sepia, Pulsatilla pratenzis, miristika fragrans, Calcium karbonikum Hahnemann, origanum majorana, Atsidum nitrikum, Aquilegia vulgaris, Strychnos Ignatius koniza kanadensis, Cyclamen purpurestsens, viburnum opulyus.
Ngokuqondene nezinye izithako, abasolwa zihlanganisa i-ethanol (35%).
Ngo iphakheji wanikela ukudayiswa iconsi "Gormel"? Nobufakazi ukusho ukuthi ungakwazi ukuthenga lokhu imithi in vials-droppers, ezenziwe ngengilazi amnyama.
Kuyini umuthi ezifana "Gormel"? Izibuyekezo ochwepheshe ukubika ukuthi khambi homeopathic ukuthi isetshenziswa iziyaluyalu kokuya esikhathini, syndrome premenstrual futhi mastitis.
Isenzo zomuthi kuhloswe normalizing umsebenzi zesifazane mkhuba. Yena kuyasiza buyisela futhi ukusebenza ngendlela efanele nomjikelezo wokuya esikhathini, has Antihemorrhagic nemiphumela analgesic.
Yini property imithi "Gormel"? Uphenyo odokotela libike ukuthi umphumela umuthi ngenxa yokubakhona yezingxenye kufakwe ngezithako zawo. Cabangela izici ngamunye izinto kabanzi:
kanadensis Koniza isicelo lesizalo ukopha (isib menorrhagia noma metrorrhagia).
Pulsatilla pratenzis elisetshenziswa inflammations ahlukahlukene neziyaluyalu kwezitho zomzimba zesifazane zokuzala, kanye ukuvuvukala sangasese, okuyinto ahambisana uketshezi. Futhi le nto kuhle kakhulu iziyaluyalu lactation nokukhulelwa, iziyaluyalu zokulawula ngaphakathi, ikhanda, izifo zokulala, zengqondo neziyaluyalu zezinzwa.
Atsidum nitrikum esetshenziselwa ukwelapha izifo of nolwelwesi lwamafinyila bemvelo okungamahlalakhona, migraine, kanye iziyaluyalu zengqondo of isimiso sokugaya ukudla bungene.
Viburnum opulyus wasebenzisa isikhathi buhlungu kakhulu.
Strychnos Ignatia isetshenziswa ukwelapha sezinzwa iziyaluyalu, ukucindezeleka futhi nokuquleka.
Aquilegia vulgaris elisetshenziswa dysmenorrhea obusebenzayo, amenorrhea, kanye nokuqwasha bese ukwethuka ngokweqile.
Miristika fragrans esetshenziselwa ukwelapha izimpawu zengqondo. Futhi, lolu ketshezi isetshenziswa bezibona okhathazekile of ngokoqobo (isib, ukucindezeleka). Ngaphezu kwalokho, le ngxenye kusiza ukuqeda yobuthakathaka ukugaya kanye ukuvuvukala.
marjoram Priganum isetshenziswa lenyuke excitability ngokobulili futhi ethukile.
Calcium karbonikum Hahnemann ikhuthaza ukwelashwa kwe-calcium umzimba iziyaluyalu. Futhi, lolu ketshezi isetshenziswa izifo nolwelwesi lwamafinyila nemvelo njalo izinqubo proliferative.
offitsinalis sepia isetshenziselwa nezimpawu uhlamvu klimaktericheskoy. Ngaphezu kwalokho, le ngxenye kuhle kakhulu yezifo zengqondo, ukucindezeleka, izinkinga zokulala, kanye ezihlukahlukene iziyaluyalu nemibandela yokukhathala female mkhuba.
Cyclamen purpurestsens elisetshenziswa zokulawula iziyaluyalu, ukucindezeleka nekhanda.
Izinkomba amathonsi ngomlomo
Lokhu kwakwenziwa ngayiphi injongo isiguli lehla "Gormel" angabelwa? Uphenyo abesifazane ukubika ukuthi lokhu izidakamizwa isetshenziswa njengendlela yokuthola ekwelapheni izifo ezihlukahlukene umthondo. It is lisetshenziswe iziyaluyalu umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi kwabobulili bubuhle ubudala enzalo.
ukwelashwa "Gormelem" ezinqunyiwe, kungakhathaliseki ukuthi izimbangela zezifo (dysmenorrhea psychogenic, ama-hormone noma yimuphi omunye).
Izimo ukusetshenziswa amaconsi
Izidakamizwa "Gormel" lokubuyekezwa endometrial mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungathola khona kanye ekupheleni sihloko, is contraindicated ukusetshenziswa kuphela ngaphansi kwezimo ezilandelayo:
lapho hypersensitivity nesineke kunoma efana izidakamizwa;
entsheni futhi ebuntwaneni.
Akunakwenzeka ukuba akhulume iqiniso lokuthi lokhu izidakamizwa ezinqunyiwe ngokuqapha kubantu abaphethwe ukusebenzisa uphuzo ngokweqile, kanye iziguli isifo sesibindi, ukulimala ebuchosheni, kuhlanganise ayilibalanga esikhathini esidlule.
kufanele Ngithatha kanjani iconsi "Gormel"?
Ukubuyekezwa (endometrium lokhu izidakamizwa regenerates ezinhle kakhulu) Ochwepheshe, kanye imiyalelo elikulesi sihloko emuthini uthi "Gormel" Amaconsi kuphela ukusetshenziswa ngomlomo.
kufanele ngisebenzisa kanjani lo muthi? Ngenxa yalesi nomuthi 10 amathonsi kumele ziyoncibilika 100 ml amanzi avamile futhi ube isigamu sehora ngaphambi kokudla. Futhi kokuthatha lesi imithi etholakalayo ihora elilodwa emva kokudla.
Imvamisa ukusetshenziswa yesixazululo umuthi kathathu ngosuku. Odokotela batusa kokuthatha lesi imithi njalo ngezikhathi ezithile (isib, njalo ngemva kwamahora ayisishiyagalombili).
kufanele ngisebenzisa isikhathi esingakanani amathonsi "Gormel"? Uphenyo abesifazane ukubika ukuthi ukwelashwa nale ejenti kumele kutsatse okungenani inyanga eyodwa. Ngokuvamile, inkambo yokwelapha ithatha izinsuku 30-90. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi esimweni ngasinye isinqumo isikhathi sokwelashwa kufanele uthathe udokotela homeopathic kuphela.
Ngokusho imiyalelo, ke medicated amathonsi "Gormel" kungabangela izimpawu kuphela omnene komzimba nezinto. Nokho, odokotela bathi amakhambi homeopathic zivame ukuba zimbi kakhulu uma isimo jikelele isiguli (okwesikhashana). Kulokhu, ethola izidakamizwa kufanele ngokushesha ayisekho. Isiguli kufanele ngokushesha uxhumane nodokotela wakho.
izincomo Specific ukuthola amathonsi
Yini odinga ukukwazi ngaphambi kokuthatha "Gormel" izidakamizwa? Izibuyekezo Ochwepheshe ukubika ukuthi ukusetshenziswa amakhambi homeopathic kungase babhebhethekisa izifo okwesikhashana, kanjalo nokuqinisa izimpawu ekhona (okuthiwa ukuwohloka kokuqala). Ezimweni ezinjalo kubalulekile uphazamisa yokwamukela izidakamizwa futhi ngokushesha xhumana nodokotela wakho.
Kuyadingeka ukuba ubonane nodokotela kanye ukubukeka ohlangothini ukusabela ezingavikelekile ezichazwe imiyalelo kubekwe, futhi engekho nomphumela oqabulayo.
ukusetshenziswa isikhathi eside zomuthi (ezinyangeni ezimbalwa noma ngaphezulu) lekufanele yentiwe ngaphansi kokuqondisa okuqinile udokotela.
Ukwakheka nomuthi kuhlanganisa 35% ETHYL utshwala. Umthamo esiphezulu ngelanga kufanele ibe mayelana 0,43 g yalolu ketshezi.
Izidakamizwa "Gormel": ukubuyekezwa kanye nezindleko
kanjani amathonsi German kwezokuphatha ngomlomo "Gormel"? Ngokusho iziguli, intengo yaleli izidakamizwa impela high. Isixazululo 30 ml angathengwa ruble 550-600. Ukuze bacedzela ngalokucwebe tifundvo yokwelashwa (izinyanga 1-3), kungase kudingeke i-amabhodlela ambalwa zomuthi.
Yini abantu bathini mayelana iziguli nomuthi futhi odokotela? Futhi yena nabanye ecaleni uthi nekusebenta okusezingeni eliphezulu zomuthi. Ngokusho izimpendulo zabo, lehla "Gormel" kujwayeleke insikazi Izitho zokuzala futhi yehlise umjikelezo wokuya esikhathini.
Ngokuphathelene impendulo engeyinhle, kulapho ngokuvamile zihlotshaniswa eyingozi zomuthi, kunzima ukufinyeleleka kanye nemiphumela engemihle yayo, okuyinto ziyabonakala ngesimo komzimba.
Izindebe ezomile: Izimbangela Nezingozi Izixazululo izinkinga